မြန်မာ့ လေတပ် တိုက်လေယာဉ်ဖြစ် သည့် ရုရှားနိုင်ငံ ထုတ် MIG-29 အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း – Shwe Ba
Homepage / International News / မြန်မာ့ လေတပ် တိုက်လေယာဉ်ဖြစ် သည့် ရုရှားနိုင်ငံ ထုတ် MIG-29 အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း
မြန်မာ့ လေတပ် တိုက်လေယာဉ်ဖြစ် သည့် ရုရှားနိုင်ငံ ထုတ် MIG-29 အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း
By Shwe BaPosted on October 17, 2020 October 17, 2020
MiG-29 တိုက်လေယာဉ် ကို Mikoyan မှ 1970 တွင် ဒီဇိုင်း ဆွဲတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး အမေရိကန်🇺🇸လေတပ်၏အကျော်အမော်များဖြစ်သည့် F-15 နှင့် F-16 တိုက်လေယာဉ်များကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်အတွက် တည်‌ဆောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမြှောက် အမြား ထုတ်လုပ်တည်ဆောက်ခြင်းကို 1981 တွင် စတင်ခဲ့ပြီး 1982 တွင် ရုရှား🇷🇺‌ လေတပ်၌ စတင်အမှုထမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန် ထိ အစီးရေ 600 ကျော်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ရုရှား‌🇷🇺လေတပ်မှ အတော်အားကိုးအားထားခဲ့ရသော စတုတ္ထမျိုးဆက် ဘက်စုံသုံးဂျက်တိုက်လေ ယာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
MiG-29 သည် တိုက်လေယာဉ်မှုး 1 ဦးလိုက်ပါရသည့် တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ထိုတိုက်လေယာဉ်မှုးအတွက် K-36D ခုန်ထွက်နိုင်‌သောအထူးထိုင် ခုံ 1 လုံးတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
MiG-29UB သည် အမောင်းသင်တိုက်လေယာဉ်မှုး 1 ဦး နှင့် လေကြောင်းနည်းပြ 1 ဦးလိုက်ပါရ‌တာကြောင့် K-36D ခုန်ထွက်နိုင်‌သောအထူး ထိုင်ခုံ2လုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ထိုတိုက်လေယာဉ်များ၏အရွယ်အစားကိုအရင်ပြောပါရစေ။
ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာအလျား – 17.32 မီတာအတောင်ပံအရှည် – 11.36 မီတာ နှင့်အမြင့် – 4.73 မီတာရှိပါတယ်။ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်ဟာ မည်သည့်အရာမှမတင်ဆောင်ထားပါက 24251 ပေါင် လေးပြီး ပစ္စည်းအစုံတင်ဆောင်ထားပါက 39683 ပေါင် လေးပါတယ်။
MiG-29UB အလျား – 17.42 မီတာ အတောင်ပံအရှည် – 11.99 မီတာ နှင့် အမြင့် – 4.40 မီတာ ရှိပါတယ်။
ထို MiG-29UB တွေဟာ မည်သည့်အရာမှမတင်ဆောင်ထားရင် 30000+ ပေါင်ခန့်လေးပြီး ပစ္စည်းအစုံတပ်ဆင်ထားပါက 45000 ပေါင် ခန့်လေးပါတယ်။၎င်းတိုက်လေယာဉ်များတွင် Klimov ထုတ် RD-33 turbofan engine2လုံးတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းအင်ဂျင်တစ်လုံးဟာ အများဆုံး ပေါင် 18900
အထိတွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်ဟာ 1 second တွင် အမြင့်ပေ 330 အထိတက်နိုင်ပြီး တစ်မိနစ်တွင် အမြင့်ပေ 65000 အထိတက်နိုင်ပါတယ်။
ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များသည် တစ်နာရီကို အမြန်ဆုံး 2400 km နှုန်းဖြင့်ပျံသန်းနိုင်ပြီး 1430 km အကွာအထိ အပိုဆီတိုင်ကီမချိတ်ဘဲ ပျံသန်းစစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍အပိုဆီတိုင်ကီထပ်မံချိတ်ဆွဲပါက ထို 1430 km ထက်ပိုပြီးစစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သာမန် MiG-29B ၏ အတွင်းဆီတိုင်ကီတွင် လေယာဉ်ဆီ 3500 kg ဆံ့ပြီး MiG-29 SM နှင့် MiG-29 SMT တို့တွင်မူ လေယာဉ်ဆီ 4000 kg ဆံ့ကြပါတယ်။
ထိုMiG-29 တိုက်လေယာဉ်များတွင် Zhuk-ME radar ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်း radar ဟာ 260 km အထိထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် တစ်ပြိုင်တည်းပစ်မှတ် 10 ခုကိုခြေရာခံနိုင်သည့် OFPS-29 ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေးစနစ်၊ SPO-15 Beryoza
ရဒါကြိုတင်သတိပေးစနစ်၊ အမြင့်ပေပြစနစ်၊ တည်နေရာလမ်းကြောင်းပြစနစ်တို့အပြင် အခြားသော အဆင့်မြင့်စနစ်များစွာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ လိုအပ်လာပါက flares decoy pod များ နှင့် ECM pod
MiG-29 တွင် Airbrake 2ခုပါပါတယ်။ ထို့အပြင် လေယာဉ်‌အနောက်စွန်ပိုင်း၌ အရှိန်ထိန်းလေထီးကြီးတစ်ခုပါပါတယ်။
ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ် သည် ဝေဟင်ဆီဖြည့်စနစ်ပါဝင်ပြီး ထိုဆီဖြည့်ငုတ်တိုင်ကို တိုက်လေယာဉ်ဦးပိုင်း၏ အရှေ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်သိမ်းဆည်းထားရှိပါတယ်။
ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွင် ပင်မလက်နက်အနေဖြင့် 30 mm ကျည်သုံး GSh-30-1 စက်သေနတ်ကြီးကို ‌တိုက်လေယာဉ်ဦးပိုင်း ၏အရှေ့ဘယ်ခြမ်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထိုစက်သေနတ်ကြီးသည် တစ်မိနစ်တွင် ကျည်အတောင့်ရေ 1800 နှုန်းဖြင့် 1.8 km အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျည်အတောင့်ရေ 150 ပါပါတယ်။ထို MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွင် လက်နက်တပ်ဆင်ရန် နေရာ7ခုပါပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ
1. အတောင်ပံ 2ဖက်အောက်တွင်6နေရာနှင့်
2. ကိုယ်ထည်အောက်တွင် 1 နေရာပါရှိပါတယ်။
၎င်းနေရာများတွင်Rockets (at MiG-29B/SM/SE/UB)
1.4km အထိသွားနိုင်သော S-5 နှင့် S-24 rocket များ
2.5km အထိသွားနိုင်သော S-8 rocket များ
Air to air missiles (MiG-29B/UB/SM/SE)
1. 40 မှ 130 km အထိသွားနိုင်သော ရုရှား🇷🇺ထုတ် R-27 missile များ (MiG-SM/SE)
2. 8 km အထိသွားနိုင်သော ရုရှား🇷🇺ထုတ် R-60 missile များ
3. 30 km အထိသွားနိုင်သော ရုရှား🇷🇺ထုတ် R-73 missile များ
4. 110 km အထိသွားနိုင်သော India 🇮🇳ထုတ် Astra missile များ
Air to surface missiles (at MiG-29SM/UB)
1. 11 km အထိသွားနိုင်သော Kh-25 ML missile များ
2. 12 km အထိသွားနိုင်သော Kh-29 T missile များ နှင့်
3. 130 km အထိသွားနိုင်သော Kh-35 V missile များ
Bombs (at MiG-29B/UB/SM/SE)
1. RBK-250, 500,750 bomb များ
2. FAB-500,1000 bomb များ နှင့်
3. KAB-500 bomb များ စသည်တို့ကိုတပ်ဆင်၍စစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
MiG-29 တစ်စီးသည် မျိုးကွဲအလိုက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 11 million မှ 20 million ကြားတန်ကြေးရှိပါတယ်။မြန်မာ့🇲🇲လေတပ်တွင် MiG-29B (10) စီး ၊ MiG-29SE (6) စီး MiG-29 SM (10) စီး နှင့် MiG-29UB (5) စီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များကို မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်
ရုရှား🇷🇺 အပြင် မြန်မာ ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ၊ မလေးရှား ၊ အိန္ဒိယ ၊ ဘယ်လာရုဇ် ၊ အီရန် ဘူဂေးရီးယား၊ ချက်၊ မြောက်ကိုရီးယား ၊
အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၊ အယ်ဇာဘိုင်ဂျန် ၊ဆားဘီးယား ၊ ယူကရိန်း ၊ ဆီးရီးယား ၊ဆူဒန် နှင့် ပိုလန် စသည့်နိုင်ငံပေါင်း 30 ကော်တွင် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာ့🇲🇲တပ်မတော်လေ၏ ပင်မကျောရိုးတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည့် MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များ အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရေးသားသူ နှင့် အချက်အလက်ရှာဖွေသူ – John Thu and Zwal Pyae Sone Lin တို့ အားလေးစားစွာ ခရက်ဒက်ပေးပါသည်။
Previous post နေခြည်ဦး ဆို့ အောက်ပြီ အား လုံး သိချင်နေကြမယ် ထင်လို့ ဖော်ထုတ်ပေး လိုက် ပြီ
Next post အိပ်ရာ ထက် မှာ အထာ ကျကျ လန်းနေပြီး ကြွေ လော က်စ ရာကောင်းေ န တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ကွညျ့ရှုသူတိုငျးကို ရငျခုနျစရာ တကိုယျလုံ…
သူမသညျ အပြိုစဈစဈဖွဈကွောငျး ဗီဒီယိုဖို…
အပွဈပွောစရာမရှိအောငျ လှပလှနျးနတေဲ့ ခန်ဓ…
အရမျးကို ခဈြစရာကောငျး တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပ…
ဖှံ့ထှားလှပတဲ့ ကိုယျလုံးလေးကို လကေ့ငျြ့ခ…